နေအိမ် → SanDisk®RescuePRO®လွန်ကဲကမ်းလှမ်းချက်
RescuePRO®ဆော့ဖ်ဝဲကိုသင့်ရဲ့အခမဲ့ activation တည်ဆောက်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့အောက်ကလမ်းညွန်အတိုင်းလိုက်နာပေးပါ:
1. အောက်တွင်သင်သည်သင်၏ SanDisk လွန်ကဲကဒ်နှင့်အတူလက်ခံရရှိသည့်ကူပွန်ကိုရှေးခယျြကျေးဇူးပြုပြီး.
>>>>သဲလွန်စ: သင့်ရဲ့ကူပွန်RescuePRO®သို့မဟုတ်RescuePRO® Deluxe ပြောပါလိမ့်မယ်တစ်ခုခု, အညီရှေးခယျြ.သင်တစ်ဦးရှိပါက RescuePRO® SSD ကိုကူပွန်, ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ2. သင်၏ operating system နဲ့ကိုက်ညီကြောင်းကိုသင်၏ရှေးခယျြသောကူပွန်ဘို့အောက်ကခလုတ်တဦးကိုရှေးခယျြ ကျေးဇူးပြု..3. အဆိုပါပြန်လည်သုံးသပ် ကျေးဇူးပြု. LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် သင့်ရဲ့ RPRID serial number ကို အသုံးပြု. activation code ကိုရယူပေါ်တွင်သင်၏ညွှန်ကြားချက်.** ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ: Should you haveacoupon for RescuePro Deluxe withaserial number that begins with RPRID-0305,
သင့်ရဲ့ကူပွန်အပေါ်ပုံနှိပ်ကြောင်းအဆိုပါနံပါတ်စဉ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းနှင့်မမှန်ကန်ထားပါတယ်.You will then need to provide your complete RPRID-0305 တစ်ဦးကိုအစားထိုးလက်ခံရရှိရန် SanDisk မှနံပါတ်စဉ်. **
သင်သည်သင်၏နဲ့ကူပွန်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့လျှင် SanDisk® SSD ကိုအခမဲ့ဖြစ်သည် 1 SSD ကိုများအတွက် RescuePRO Deluxe ၏တစ်နှစ် activation, SSD ကိုဆော့ဖ်ဝဲRescuePRO® Deluxe သင့်ရဲ့အခမဲ့ 1-တစ်နှစ် activation တည်ဆောက်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့အောက်ကလမ်းညွန်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ:
>>>>သဲလွန်စ: သင့်ရဲ့ကူပွန်RescuePRO® Deluxe ပြောပါလိမ့်မယ်.2. သင်၏ operating system နဲ့ကိုက်ညီကြောင်းကိုသင်၏ရှေးခယျြသောကူပွန်ဘို့အောက်ကခလုတ်တဦးကိုရှေးခယျြ ကျေးဇူးပြု..3. အဆိုပါပြန်လည်သုံးသပ် ကျေးဇူးပြု. LC Tech မှ Activation လုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန် သင့်ရဲ့ RPSSD serial number ကို အသုံးပြု. activation code ကိုရယူပေါ်တွင်သင်၏ညွှန်ကြားချက်.** ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ: Should you haveacoupon for RescuePro Deluxe for SSD withaserial number that begins with RPDLX-0602,
သငျသညျကို Windows XP ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုပါက, ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ RescuePRO®နျ Standard တစ်ခု XP ကိုသဟဇာတမိတ္တူသို့မဟုတ် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ RescuePRO® Deluxe တစ်ခု XP ကိုသဟဇာတမိတ္တူများအတွက်.
ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဆော့ဖျဝဲကို install ကျေးဇူးပြု., သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ် run တဲ့အခါမှာ, you will then be prompted to activate your software. သငျသညျထို့နောက် activation page ကို link တစ်ခုပေးထားပါလိမ့်မည်. လင့်ခ်အတိုင်းလိုက်နာနှင့် form မှာဖြည့်ပါကျေးဇူးပြုပြီး, RescuePRO®ဆော့ဖ်ဝဲကိုသင့်ရဲ့အခမဲ့မိတ္တူကိုသက်ဝင်ဖို့ Serial Number တို့ပါဝင်သည်ရန်သေချာစေပါ. activation ဖို့ခြေလှမ်း-by-step လမ်းညွှန်များအတွက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ.